Top 10 xịt dưỡng tóc mềm mượt tốt nhất năm 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 10 xịt dưỡng tóc mềm mượt tốt nhất năm 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 xịt dưỡng tóc mềm mượt tốt nhất năm 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ukuze uthole izinwele eziqinile, ezibushelelezi, ngaphezu kokugeza nokusebenzisa i-conditioner, isifutho sezinwele siyindlela yokusiza izinwele zethu ukuba zinikezwe ngokugcwele izakhi ezidingekayo. Asidingi ukuchitha isikhathi esiningi, kulula futhi kulula ukuyisebenzisa. Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ezikhishwe emvelweni, ngayinye enezinzuzo zayo.
Ngakho, umusa isifutho sezinwele Iyiphi ehamba phambili futhi ethandwa kakhulu phakathi kwabesifazane namuhla? Ake sithole khona lapha!
1 Iyini i-hairspray?
1.1 1. Ukuqhunyiswa kwezinwele
1.2 2. Tsubaki hairspray
1.3 3. Tresemme Hairspray
1.4 4. Pomelo Cocoon Grapefruit Peel Amafutha Hair Spray
1.5 5. I-Keratin hairspray
1.6 6. I-Cenota Grapefruit Essential Oil Hair Spray
1.7 7. ISITHELO SAMAGILIPI EZINKONDLO . I-Grapefruit Essential Oil Spray
1.8 8. I-Double Rich Hairspray
1.9 9. SUNON grapefruit essential oil hair spray
1.10 10. No5 Iphunga Nourishing Hair Spray
I-hair spray ingumugqa womkhiqizo oqukethe izakhi ezibalulekile zezinwele ukusiza ukushelela, ukuthambisa, ukubuyisela noma ukuvikela izinwele kuma-ejenti ayingozi. Imvamisa, isifutho sezinwele sizofakwa ebhodleleni futhi sisebenze ngomshini wokwenza inkungu, esiza imisoco ingene ijule ezimpandeni zezinwele. Kungakho ekhabetheni lakho lobuhle, uma umuntu ephethe i-hairspray yekhwalithi, ngokuqinisekile izokwenza izinwele zabo zibe zinhle kakhulu futhi zigcwele impilo.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-hairspray ngempumelelo, kufanele usebenzise i-hairspray efanele, ngesikhathi esifanele nangesikhathi esifanele. Ngaphezu kwalokho, kufanele ukhethe i-hairspray efanele futhi uyithenge kumikhiqizo ehloniphekile!
1. Ukuqhunyiswa kwezinwele
Izithako zemvelo zombili azilungile futhi azinazinwele, azinazo ngokuphelele izithako eziyingozi ezithinta impilo yomsebenzisi.
Vikela izinwele zakho ekungcoleni, emisebeni ye-UV kanye nokushisa kwesomisi. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo nawo unomphumela “we-detox” ukuze izinwele zikhishwe futhi zibe namandla.
Ithuthukisa ukukhanya, ukuthamba, ngaleyo ndlela ithuthukise ikhwalithi yonke yezinwele. Ngemuva kokusetshenziswa okuvamile, izinwele zakho zizoba zinde futhi ziqine ngokushesha futhi ukulahlekelwa izinwele nakho kuvinjelwa ngokuphumelelayo.
Idala ivolumu ngemva kokumiswa futhi isiza ekwenzeni isitayela. Ngenxa yalokho, uzoba nezinwele ezi-bouncy ukuze uvalelise ngokuzethemba ezinwele ezimncane, eziyisicaba, ezifiphele, ezingalawuleki zesikhathi esidlule.
Isifutho sokubuyisela izinwele ze-Hairburst siwumkhiqizo wohlobo oludumile lokunakekelwa kwezinwele e-UK. I-Hairburst iwuphawu oludume ngokukhuthaza zonke intombazane emhlabeni jikelele, ikakhulukazi e-UK, indlela yokunakekela kahle izinwele zakho ukuze uthole izinwele eziqinile kusuka ekujuleni.
I-Pea Sprout Extract: I-Organic mung bean sprout extract igcwele izakhamzimba ezikhonjiswe ukuthi zandisa impilo yezinwele, zandise izinwele zekhanda “ukuminyana” futhi zinciphise ukulahleka kwezinwele okungemnandi.
I-Raspberry Extract: Icebile ngamafutha acid abalulekile, ama-phytosterols nama-antioxidants. Ukusuka lapho, ithambisa, ikhiphe ubuthi futhi ivikele izinwele ezintweni eziyingozi zemvelo.
Ama-Polymers: Lezi yizinto ezihlanganisa ukwakheka kwamaprotheni ezinwele, okwenza izinwele zibe mkhulu futhi zibe bushelelezi ukuze kwenziwe isitayela kalula. Ngakolunye uhlangothi, lesi sithako sinikeza amandla okugcina izinwele ziqinile futhi ziqine.
Ngaphezu kwalokho, i-Hairburst hair spray nayo iqukethe i-Aquaflex XL-30 yokwenza ivolumu, i-Nettle extract ukuze ikhuthaze ukukhula kwezinwele, noma i-Anagain, enamandla okugcina umswakama ukuze ugcine izinwele zicwebezela futhi zigcwele impilo.
2. Tsubaki hairspray
Ngenxa yezithako ezikhishwe ezimbalini nakumajikijolo, isifutho se-Tsubaki conditioner sinephunga elimnandi nelimnandi, elihlala isikhathi eside ezinweleni zakho.
I-Tsubaki Moisturizing Spray isiza ukuhlinzeka ngomswakama othambisayo wemvelo, igcine umswakama futhi isiza ukugcina izinwele zicwebezela futhi zicwebezela.
Ngaphezu kokuvikela izinwele emiphumeleni eyingozi yokusebenzisa okomisa izinwele kanye neziqondiso, isifutho sokubuyisela izinwele se-Tsubaki singavimbela ukulimala kwezinwele okubangelwa imisebe ye-UV elangeni.
Yondla izinwele ngezinhlayiya ze-nano ukusiza izinwele ezibushelelezi.
I-Tsubaki wumkhiqizo osebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ngaphansi kweqembu elidumile le-Shiseido eJapane. Kusukela yethulwa, imikhiqizo ye-Tsubaki ibithandwa futhi yakhethwa ngabathengi abaningi emazweni amaningi ahlukene emhlabeni jikelele, kubandakanya neVietnam.
Izifutho ze-Tsubaki zonke zikhishwa kuwoyela we-camellia obomvu nakwamanye amakhambi emvelo, aziqukethe izinto ezilondolozayo, eziphephe ngokuphelele empilweni yabasebenzisi. Akukhona nje ukunakekela nokuvikela izinwele, iphunga elimnandi elivela kule mikhiqizo liletha umuzwa omnandi futhi okhululekile kuwe.
Isithako esiyinhloko salo mkhiqizo sikhishwa ekuhlanganiseni kwezimbali namajikijolo. Kuhlanganisa ne-Soy Protein, Amafutha e-Camellia, i-Royal Jelly kanye nezithako ezikhethekile zokubuyisela. Ukuletha ikhono lokondla nokubuyisela umonakalo omkhulu ngaphakathi kwezinwele, okwenza izinwele ziqine, zibushelelezi futhi zibe endaweni.
Isiza ukuvikela izinwele ekulimaleni kokushisa kufika ku-230oC. Kusukela manje kuqhubeke ungakwazi ukwenza kahle izinwele zakho ngaphandle kokukhathazeka ngokulimala kokushisa. Umkhiqizo wethenjwa ngabalungisi bezinwele emhlabeni jikelele.
Isifutho sokubuyisela izinwele se-Tresememe sivikela izinwele ekushiseni okufika ku-230oC ngenxa ye-Pro Technology System ethuthukisiwe ngokusetshenziswa okuhle okungu-5 emkhiqizweni owodwa: Izinwele zihlelekile – ziyacwebezela – zithambile – zinciphisa i-lint – ama-detangles.
Amafutha e-Marula ne-keratin asiza kakhulu ekunakekeleni nasekukhuliseni izinwele, ezifanele izinwele ezidayiwe.
Umkhiqizo ukunika iphunga elilula, elimnandi neliphumuzayo.
I-Tresememe hair spray iwumkhiqizo wokunakekela izinwele wohlobo lwe-Tresemme e-United States. Ngombandela othi “izinga elihle le-salon yezinwele nsuku zonke, ekhaya”, i-Tresememe brand ihlale iletha imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele yekhwalithi engcono kakhulu ethenjwa abesifazane abaningi baseVietnam.
4. Pomelo Cocoon Grapefruit Peel Amafutha Hair Spray
– Izinwele ezisebenzayo nezilungile kanye nesikhumba.
– Isiza ukunciphisa ukulahleka kwezinwele nokoma.
– Inikeza izakhamzimba ukugcina izinwele zibushelelezi futhi zithambile.
I-Pomelo Cocoon i-hairspray kawoyela ebalulekile evela emvelweni yaseVietnam inobungani ezinweleni nasekhanda, iyasebenza futhi ayinabungozi. Imikhiqizo enezithako: Amanzi, i-Grapefruit ikhasi lamafutha abalulekile, i-Jojoba serum, i-vitamin E, i-Vitamin B1, i-Protein Effect: Vimbela ukulahlekelwa izinwele, ukukhuthaza ukukhula kwezinwele, ukubuyisela izinwele ezilimele. Yehlisa ukoma, yondle isikhumba sekhanda nezimpande zezinwele, isiza izinwele zibe bushelelezi ngokwemvelo. Idizayini eqinile, elula ukuyisebenzisa
5. I-Keratin hairspray
Isithako esiyinhloko yi-keratin, lapho ifafazwa ezinweleni izofaka i-keratin ezinweleni. Ngakho-ke, izinwele zinempilo, zinciphisa ukuhlukaniswa okumile.
Buyisela umonakalo, ikakhulukazi izinwele eziye zasetshenziswa ngamakhemikhali odayi, okomisa, nama-curls.
I-Keratin hair spray inephunga elimnandi kakhulu, elihlala isikhathi eside, likunikeza umuzwa omnandi usuku lonke.
I-cuticle ye-fiber yezinwele ine-keratin, lapho izinwele zithinteka kabi, ukulahlekelwa kwe-keratin izinwele kuzonciphisa ngokuphawulekayo ukukhanya kwazo. Izinwele ziba buthakathaka, zome futhi zibe brittle, zithambekele ekuhlukaneni nasekuqhekekeni. I-Keratin hairspray izohlinzeka nge-keratin ukondla izinwele eziqinile, ikunike izinwele ezi-bouncy ezigcwele impilo.
Uma ufuna i-hairspray ethengekayo esesezingeni eliphakeme kakhulu, isifutho sezinwele se-Keratin siyisinqumo esihle kakhulu. Isifutho sokubuyisela izinwele se-Keratin sigcina iphunga isikhathi eside, ngakho-ke siyathandwa abantu abasha abaningi.
6. I-Cenota Grapefruit Essential Oil Hair Spray
– Nikeza umsoco wezinwele, ukhuthaze ukukhula kwezinwele, ukhulise izinwele, uqinise izinwele, ubuyisele izinwele ezilimele.
– Ivimbela ukulahleka kwezinwele ukugcina izinwele zicwebezela futhi zinempilo.
– Yehlisa izinwele ezomile, ezishwabene, ibuyisela iziphetho ezihlukene kanye nokusha ngenxa yamakhemikhali.
I-Cenota grapefruit essential oil spray with the main extract from grapefruit water and distilled from Vietnam green skin grapefruit peel, kuhlanganiswe nelemongrass, ginger, almond,… Ukusetshenziswa kweCenota grapefruit essential oil spray hair kunikeza Ukondla izinwele, kukhuthaze ukukhula kwezinwele. , yenza izinwele zibe zinde, zijiye izinwele, zibuyisele umonakalo ezinweleni Ivimbela ukuqothuka kwezinwele ukwenza izinwele zicwebezele, zibe nempilo futhi zibe zinhle. Yehlisa izinwele ezomile, ezishwabene, ilungisa iziphetho ezihlukene kanye nokushiswa kwamakhemikhali. Iphunga elimnandi ngokwedlulele, hhayi izinwele ezinamathelayo, iphunga likawoyela we-grapefruit,
7. ISITHELO SAMAGILIPI EZINKONDLO . I-Grapefruit Essential Oil Spray
– Yehlisa izinwele ezomile, uhlukanise iziphetho, ubuyisele izinwele ezilimele.
– Ikhuthaza ukukhula kwezinwele, yondle isikhumba sekhanda, isiza izinwele zibushelelezi ngokwemvelo.
I-Grape fruit essential oil conditioner enezithako: Amanzi e-Aqua, amafutha e-citrus grandis pomelo ikhasi le-grapefruit peel, i-glycerin, i-panthenol, i-tocopheryl acetate, i-pentylene glycol. Imiphumela: Vimbela ukulahleka kwezinwele, khuthaza ukukhula kwezinwele, ubuyisele izinwele ezilimele. Yehlisa ukoma, yondle isikhumba sekhanda nezimpande zezinwele, isiza izinwele zibe bushelelezi ngokwemvelo. Umkhiqizo usiza futhi ukugqugquzela ukukhula kwezinwele ngokushesha nangokushelela. Indlela yokusebenzisa amafutha abalulekile e-grapefruit: fafaza izinwele, izimpande zezinwele, sebenzisa izikhathi ezi-2 ngosuku.
8. I-Double Rich Hairspray
– I-Double Rich hairspray ibuyisela umonakalo.
– Imbewu ye-Vita Capsule inikeza amavithamini A, D, E… ekhanda elinempilo.
– Inephunga elimnandi ezinweleni (iphunga likagwayi, intuthu yemoto, ukudla, …).
I-Double Rich Hair Spray iwukunakekelwa okubalulekile kwezinwele ezomile nezilimele. Ngefomula ehlanganisa uhlelo oluyingqayizivele lwePhytoCollagen kanye ne-Shea Bulter ekhishwe ukuze ikusize uthole ngokushesha izinwele ezibushelelezi nezicwebezelayo ozifunayo. Umkhiqizo unezela Amaprotheni namavithamini abalulekile, okusiza ukubuyisela ukushelela futhi ukondle izinwele eziqinile. Ibhodlela lesifutho linephunga elincane eliyimpuphu, ngaphandle kwezinwele ezibushelelezi, ukukanywa kalula nokunciphisa ukuphuka.
9. SUNON grapefruit essential oil hair spray
– Igcina izinwele zicwebezela
– Yehlisa ukuqothuka kwezinwele
– Ikhuthaza ukukhula kwezinwele
I-SUNON grapefruit essential oilspray iwumugqa wokugcina womkhiqizo i-lemontuoi.com efuna ukuwuthumela kuwe. Lona umkhiqizo okhuthaza ukukhula kwezinwele ngokushesha. Yehlisa ukulahleka kwezinwele futhi yenza izinwele zicwebezele, ivimbele ukungqubuzana. Ngokukhipha uwoyela obalulekile we-grapefruit, lesi sifutho sezinwele ngeke sibangele ukunamathela noma ukungakhululeki kubasebenzisi. Iphunga elimnandi le-Grapefruit Flower lisiza ekunciphiseni ukucindezeleka futhi ligweme ubuhlungu bekhanda, ukungezwani nokukhathala.
10. No5 Iphunga Nourishing Hair Spray
– Inikeza imisoco ukubuyisela umswakama.
– Ivimbela ukulimala ngaphakathi kwezinwele nesikhumba.
– Isixazululo senkungu ukusiza ukukhanya nokugcina umswakama.
I-No5 hair spray inikeza izakhi zokubuyisela umswakama, ukuvimbela ukulimala ngaphakathi kwezinwele nekhanda, izinwele eziqinile neziguquguqukayo. Isenzo esikabili esigcwalisa izithako zokuswakama kwesikhumba futhi sivikele izinwele emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UV noma ngaphansi kokushisa okuphezulu kwesomisi sezinwele. Inkungu isiza ukucwebezela futhi igcine umswakama, ishiya izinwele zibushelelezi futhi zigoqe. Iphunga lilula futhi liyayenga, uwoyela obalulekile udakwa kakhulu ngenxa yephunga elimnandi, kodwa angasetshenziswa kuphela ngemva kokugezwa izinwele lapho izinwele zimanzi.
Ngenhla uhlu lwemikhiqizo eyi-10 ehamba phambili ye-hairspray namuhla. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.
Xem Thêm Oppo Reno 5 5G (Reno5 5G) Chính hãng, Giá rẻ, Bán trả góp 0% | Muasalebang
Ngộ độc rượu? Triệu chứng, cách xử trí và phòng chống ngộ độc rượu | Muasalebang
CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2021 có thể là thời cơ để Faker chấm dứt sự nghiệp của mình | Muasalebang